Ehellada dadkii lagu xasuuqey Golweyn oo u hanjabay Shisheeyaha AMISOM [Dhagayso].
Wasiir ay isku dhowyihiin madaxweyne Farmaajo oo lagu bahdilay garoonka Garowe.
Melleteriga Itoobiya oo deegaanno laga riixay iyo caasimadda Amxaarada oo halis ku jirta [Warbixin].
Weeraro 10 askari lagu dilay oo ka dhacay duleedyada Baraawe iyo Afgooye.
Ergay Xildhibaan soo xulay oo Baydhabo lagu dilay iyo warar kale.
Waan ka Tawbad keenay dustuurka Shibroon [Maqaal].
0 Sunday September 19, 2021 - 12:35:42
Waxaa maalmihii lasoo dhaafay bogaga internetka iyo baraha bulshada ee ay Soomaalidu ku xiriirto lagu soo bandhigayay tixane maqal iyo muuqaal ah kuwaas oo lagu falanqaynayo khaladaadka dhanka diinta ah ee ku jirta dustuurka ay ku dhaqanto dowlada Soomaaliya.
0 Monday August 16, 2021 - 20:13:24
Waa Maqaal uu wadaadyare Xaashi uu ku eegayo waxa ay latahay sida guusha Taliban ay usaameyn doonto jihaadiyiinta Soomaaliya.
Soomaaliya waa Afqaanistaanta Bariga Afrika.
0 Monday August 16, 2021 - 20:10:37
"Ilaahay wuxuu noo ballanqaaday guul, Buushna guuldarro iyo inuu na tirtiri doonio; waase loo joogaa labada ballanqaad midka rumoobi doona" – Mullah Cumar, hoggaamiyihii hore ee Daalibaan, 2001.
Maxaad ka ogtahay Xarunta Dhaqanka ee Hargeysa?
0 Tuesday August 03, 2021 - 13:21:28
Maalmahan waxay qeylla dhaan kasoo yeeraysaa bulshada magaalada Hargeysa kadib markii halkaas laga yagleelay xarun lagu fasahaadinayo ragga iyo dumarka hadaba akhriso warbixintan soo socota.
Koowda Luuliyo 61 Sano Kadib 1960-kii Soomaaliya oo Gummeysi dhax muquuranaysa [Warbixin].
0 Visits: 16293 | Thursday July 01, 2021 - 12:25:24
0 Friday May 28, 2021 - 08:40:08
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay dadkeennu wajahayeen jahawareer siyaasadeed iyo kuwo amni. Waxa dhacdey in xukuumaddii federaalka iyo ciidankeedii ku kor dagaallamaan dadkii shacab ahaa, heer ay haayadihii reer galbeed ee dawladda taageeri jirey sheegeen in 60 illaa 100 kun oo qoys ay qaxeen. Intii…
0 Sunday December 06, 2020 - 08:11:32
0 Saturday November 21, 2020 - 18:58:08
Wariye Cabdullaahi Yaasiin Jaamac oo kamid ah suugaanlayda Soomaaliyeed ayaa tiriyay gabay uu diiradda ku saarayo isdilka udhaxeeya Xabashida Itoobiya.
0 Sunday November 01, 2020 - 16:56:24
0 Thursday September 24, 2020 - 05:15:39
Berigii uu dalku u qaybsanaa hoggamiyeyaasha dagaalka (warlords) ayaa degmo ama deegaan ka mid ah dalka Soomaaliya waxa ka jiray nin Janan ah oo la oran jiray "Jananka laba ciidan", waxaana loogu bixiyey laba ciidan oo ah laba reer oo mid magaalada ku sugan yahay, midka kalena magaalada soo…
0 Thursday September 17, 2020 - 17:20:11
Iyada oo horeba loo ogaa in hogaamiyeyaasha carabtu ay xidhiidh qarsoodi ah la lahaayeen dawladda Israa'iil ayaa haddana waxa aad loo hadal hayaa heshiiskii layaabka ahaa ee shaley ka dhacey washington. Kaas oo ay madaxda Imaaraatka, Baxreyn iyo yuhuuddu kala sexeexdeen wax loogu yeedhay heshiis…
0 Sunday September 06, 2020 - 13:48:55
Siyaasadda ayaa la sheegaa in ay tahay turubka oo kale haddii aad Turub barad tahayna waxa dhici karta in si degdeg ah lagaaga adkaado turubka waayo ninka kaa badiyaa waa mid kugu rogi kara oo lixle turub ah kaaga qaadi kara Yake (ace).
0 Thursday August 20, 2020 - 19:06:04
Waxaa horraantii sannadkii 2019kii ay dawladda Soomaaliya (Villa Somalia) ku soo eedeysay wakiilkii Qarammada Midoobay ee Soomaaliya Danjire Nicholas Haysom, dhalasho ahaanna ka soo jeeday dalka Koonfur Afrika in uu ku dhaqaaqay faragelin ka baxsan shaqadii loo soo idmaday.
0 Monday July 27, 2020 - 17:50:10
Asalkaba aadanaha hab fekerkiisu wuxuu saamayn weyn ku leeyahay hab-dhaqankiisa. Haddii qofku rumeysan yahay in aanu waxba noqon karin waxba ma noqdo.
0 Monday July 20, 2020 - 17:20:41
Bina aadamku waa daciif hase ahaatee wuxuu alle siiyay maskax uu kaga soocan yahay xayawaanka Waxa aynu ku jirnaa wakhti ka duwan cusuurtii hore, xaqiiqada oo muruxsan oo la soo bandhigaa kuma filna in ay dadku fahmaan sababta oo ah waa hore ayaa lagu shubey bidcooyin iyo shubuhaad u baahan in lala…
0 Saturday July 04, 2020 - 12:33:17
0 Wednesday May 20, 2020 - 15:26:16
Dacwad oogaha guud ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in ay diiwaan geliyeen illaa 40 kiis oo ah hanjabaado dil ah oo loo jeediyay gabadha muslimadda ah ee Caa'isha Romano taas oo dhowaan xuriyadeeda dib u heshay kadib 18 bilood oo ay ku afduubneed Soomaaliya.
0 Saturday May 16, 2020 - 14:34:33
"NIN YARAAN KU LOOFARAY WUXUU LUMIYEY RAACDEEYE"
0 Saturday May 16, 2020 - 14:23:05
Dhiigga Soomaalidu ma sunbaa?
0 Saturday May 09, 2020 - 21:40:18
Markii ay gaalada reer Galbeedku uu hoggaaminayo ay xoog kaga adkaan waayeen dadka Muslimiinta ah, ayaa waxa ay wax ka beddeleen dagaalkoodii ama duullimaadkoodii. Dagaalkaasi waxa uu isu rogay nooca loo yaqaan dagaal maskaxeedka (qaswul-fikriga).
0 Wednesday May 06, 2020 - 12:26:35
Max'med Cabdullaahi Farmaajo Madaxweynaha dowladda Federaalka ayaa ka damqaday laba qof Kenyaan ah oo maalin ka hor ku dhintay diyaarad lagusoo riday Koonfurta dalka Soomaaliya.
0 Sunday May 03, 2020 - 12:52:00
Waxaan aad u la yaabaa warbixinta iyo xogta ay soo gudbinayaan afhayeennada dawladda laakiin aan anigu rummaysnahay in ay dalka ka joogaan hal magaalo, hal jid oo magaaladaa ka mid ah iyo weliba hal guri oo jidkaa ku yaalla, lana yiraahdo Villa Somalia.
0 Wednesday April 29, 2020 - 09:16:51
Aayadda 26aad ee suuratul Baqara waxa uu Alle (swt) ku xusay oo uu tusaale u soo qaatay cayayaanka aadka u tabarta daran ee la yiraahdo Kaneecada.
0 Thursday April 23, 2020 - 15:20:51
Kadib markaan akhriyay qodobadii kasoo baxay shirka ay qabatay xarakada al-Shabaab, xafiiskeeda qaabilsan siyaasada, go'aanada ay soo saareen ka qeybgalayaasha, kuwaas oo ku qornaa Luuqadaha Soomaaliga iyo English-ka waxay la gaar ahaayeen lix (6) qodob kuwaas oo aan doonayo inaan ku gorfeeyo qormadan…
0 Sunday April 12, 2020 - 18:51:49
Kadib markaan akhriyay qodobadii kasoo baxay shirka ay qabatay xarakada al-Shabaab, xafiiskeeda qaabilsan siyaasada, go'aanada ay soo saareen ka qeybgalayaasha, kuwaasooku qornaa Luuqadaha Soomaaliga iyo English-ka waxay la gaar ahaayeen lix (6) qodob, kuwaas oo aan doonayo inaan ku gorfeeyo qormadan…
0 Monday March 30, 2020 - 20:07:13
23-kii Rajab 1441H, waxaa soo gabagaboobay shir socday muddo 5 maalmood ah oo ay qabatay Xarakada Al-Shabaab, kaas oo lagu marti qaaday dad kor u dhaafaya 100-xubnood oo isugu jira odayaal dhaqameed, culimo iyo qaar kamid ah madaxda Al-Shabaab sida ay shaaciyeen warbaahinada kooxda taageera, laguna…
0 Sunday March 29, 2020 - 10:35:11
Internetku waa shabakad ballaaran oo ay ku jiraan mareego tiro aan lagu koobi Karin, dadka isticmaalana waa dad kala duwan, haseyeeshee mid weliba wuxuu ka raadsadaa hadafkiisa iyo baahida markaas heysa.
0 Tuesday March 24, 2020 - 12:19:39
Ilaahay xigmadihiisa waxa kamid ah in aadmiga furayaasha dunida kolba qolo u dhiibo, qolyahaasi loo dhiibayaa gaalo iyo islaam ka ay doonaan ha ahaadeen eh waxa ay maraan tijaabo dunyawi ah.
0 Friday March 06, 2020 - 09:48:06
Nin socoto ah ayaa beri u yimid niman dhallinyaro ah oo geelley ah markaas ayuu weyddiiyay qolada ay yihiin.
0 Saturday February 29, 2020 - 15:08:21
Qormadan waxaa igu dhaliyay kadib markii aan arkay duqeymo uu Mareykanku ku dilay dad maati ah oo uu ku jiray maamulihii shirkadda Hormuud ee Jilib iyo sida uu dhacdadaasi uga hadlay Wasiirka Warfaafinta DFS, Maxamad Cabdi Xayir (Maareeye) una bogaadiyay Africom in ay gumaaddo haweenka iyo carruurta.
0 Monday February 24, 2020 - 12:28:20
Todobaadyadii lasoo dhaafay waxaa siyaasadda Soomaaliya caan ka noqotay in madaxda iyo siyaasiyiinta mucaaradku adeegsadaan awrkacsi qabyaaladeed.
Inqilaab fashilmay oo ka dhacay wadanka Suudaan.
21/09/2021 - 11:01:12
19/09/2021 - 12:35:42
Dowladda Imaaraatka oo liiska 'Argagaxisada' ku dartay Shakhsiyaad iyo shirkado gaancsi.
14/09/2021 - 13:17:55
20 sano kadib Shacabka Mareykanka oo xusaya weeraradii 11 September iyadoo ciidamadoodu ay ku jabeen Afghanistan [Warbixin].
11/09/2021 - 15:21:06
Dowladaha Urur goboleedka ECOWAS oo xayiraad kusoo rogay melleeteriga Gini.
09/09/2021 - 16:55:31
Madaxweyne ku xigeen ucararay Tajakistan iyo Taliban oo Afghanistan qabsatay.
06/09/2021 - 10:19:00
Taliban oo qabsatay gobolkii ugu dambeeyay ee gacanteeda ka maqnaa.
05/09/2021 - 17:08:56
Xarakada Al-Shabaab oo iska fogeysay dilka Ikraan Tahliil [WARBIXIN].
03/09/2021 - 13:31:12
Sawirro: Reer Afghanistan oo dhigaya dabaal degyo ay ku muujinayaan farxadda Xuriyadda.
01/09/2021 - 09:00:28
40 katirsan Melleteriga Yemen oo ku dhintay weerar ay geysteen wakiillada Iiraan.
30/08/2021 - 12:33:17
Mid kamida saldhigyada ciidamada Mareykanka ee dalka Ciraaq oo weerar sawaariikh ah lagu qaaday.
28/08/2021 - 09:20:01
Taliban oo Hoggaamiye caan ah u magacaawday Wasiirka cusub ee Difaaca.
25/08/2021 - 12:11:28
Sheekh Dabiixullaah "Hadafkii aan usoo jihaadnay wuxuu ahaa in Shareecada Islaamka laysku maamulo dowlad Islaami ahna ladhiso".
23/08/2021 - 17:52:23
Taliban oo duullan cusub ku qaaday gobol ay isku aruursanayeen dagaal oogayaal hore.
23/08/2021 - 11:49:14
Dad cumalo ah oo ku dhintay isbuurasho markale ka dhacday garoonka Kaabuul.
22/08/2021 - 16:36:52
Madaxweynaha Kenya oo Bandow hor leh kusoo rogay wadankiisa.
19/08/2021 - 09:42:38
Faah Faahin: dagaal 30 askari lagu dilay laguna qabtay taliyihii ciidanka Badda Galmudug oo ka dhacay deegaanka Qeycad.
17/08/2021 - 17:19:32
Joe Biden oo qiray in dalka Afghanistan uu yahay Xabaalaha soo duulayaasha [Dhageyso Warbixin].
17/08/2021 - 16:44:30
Sidee ku bilowday duullaankii Mareykanka ee Afghanistan sideese ku dhammaaday [dhageyso Warbixin].
17/08/2021 - 13:44:24
16/08/2021 - 20:13:24
Maxaad ka taqaan qaab dhismeedka Hoggaanka Imaarada Islaamiga ah [Warbixin].
16/08/2021 - 15:35:40
16/08/2021 - 20:10:37
03/08/2021 - 13:21:28
01/07/2021 - 12:25:24
28/05/2021 - 08:40:08